Madaxda ku shirsan Villa Somalia ayaa isku afgartay dhismaha seddax guddi oo hagi doona… – Hagaag.com
Madaxda ku shirsan Villa Somalia ayaa isku afgartay dhismaha seddax guddi oo hagi doona…
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad goboleedyada oo shir uga socda Madaxtooyada ayaa la sheegayaa in ay gaareen is faham hordhac ah, ayna ku guda jiraan marxaladii u dambeysay.
Shirkan oo habeen hore bilowday ayaa shalay illaa xalay u socday Madaxda, waxaana looga hadlayay hirgelinta heshiiskii doorasho ee 17-kii bishan ay gaareen iyo sidii jadwalka doorasho iyo Guddiyada maamulaya loo soo saari lahaa.
Ilo ku dhow dhow Madaxtooyada ayaa sheegaya in Madaxda ay isku afgarteen dhismaha saddex guddi oo kala ah Guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad Goboleed, dhismaha Guddiga xalinta khilaafaadka.
Saddexdan Guddi ayaa waxaa kala magacaabi doona Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad Goboleedyada, sida Guddiga doorashada heer Federaal oo Madaxweynaha soo magacaabayo, ayna xubno ku yeelan doonaan Dowlad Goboleedyada.
Guddiga doorashada Heer dowlad goboleed ayaa waxaa soo magacaabi doona Maamul Goboleedyada, halka Guddiga Xalinta khilaafaadka uu Madaxweyne Farmaajo soo magacaabayo.
Sidoo kale Madaxda ayaa ka doodayay asteynta kuraasta Xildhibaannada deegaanada doorashadooda ka dhaceyso, iyadoo la isla gaaray in maamul goboleed kasta labo deegaan doorasho ay ka dhacdo.
Madaxda Dowlad goboleedyada ayaa dib ugu laaban doona degaannadooda si ay latashiyo ula soo sameeyeen Mas’uuliyiinta maamulada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si ay u soo magacaabaan Xubnaha dhinacooda ka socda ee Guddiga doorashooyinka.